विर्सने बानी छ ? दिमाग तेजिलो बनाउन यी ६ खानेकुरा | Nepal Online Patrika
Home रोचक विर्सने बानी छ ? दिमाग तेजिलो बनाउन यी ६ खानेकुरा
विर्सने बानी छ ? दिमाग तेजिलो बनाउन यी ६ खानेकुरा
के तपाईंलाई विर्सने समस्याले सताएको छ । बढी भुल्ने र विर्सने समस्या छ । छ भने तपाईको खान्कीमा पौष्टिक तत्वको अभाव रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मस्तिष्कको विकासको लागि केही खानेकुरा खान महत्व पूर्ण मान्छिन् । जसको नियमित प्रयोगले स्मरण शक्तिको विकास गर्न सकिन्छ ।
जो मानिस दिनहुँ ओखर सेवन गर्छन् उनीहरुमा स्मरण शक्तिको बढोत्तरी हुन्छ । ओखरमा ओमेगा थ्री फ्याट्टी अम्ल, प्रोटिन, फाइबर, एन्टी अक्सिडेन्ट जस्ता आवश्यक तत्व पाइन्छ ।
यसमा प्रसस्त मात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट पाइन्छ जसले मस्तिष्कका कोषको क्षयिकरण हुनबाट बचाउँछ ।
दहीमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, चिल्लो, क्याल्सियम तथा फोस्फोरस जस्ता लवणहरु पाइन्छ । यसले सरीरमा लाभदायी जिवाणुलाई समेत फाइदा पूराउँछ भने हानिकारक जिवाणुलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्छ । दहीमा एमिनो एसिड पाइन्छ जसले दिमागी तनाव कम गरी स्मरण शक्तिमा बढोत्तरी गर्न सघाउ पूराउँछ ।
जाइफलको सेवनले सरीरलाई चिसोबाट बचाउने मात्र होइन यसमा हुने विशेष तत्वले मस्ष्ितकलाई स्वस्थ राख्न तथा स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत पूराउँछ ।
मसलाको रुपमा तुलसीका पातको प्रयोग निकै लाभदायक हुन्छ । छिटो भुल्ने समस्या भएका मानिसले दिनको २/३ तुलसीको पात खाँदा त्यसले फाइदा गर्छ ।
Previous article२ हजार तोकियो RT-PCR कोरोनाको परिक्षणको शुल्क
Next articleएकासी ह्वात्तै घट्यो सोच्नै नसक्ने गरि खाना पकाउने ग्यासको भाउ : हेर्नुहोस
यस्ता कुरा ख्याल गर्नुहोस् तातो पानीले नुहाउने बानी छ भने
किन टाँगिन्छ ढोकामा खुर्सानी र कागती ? यस्तो छ वास्तविक कारण
मुला खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी चीज
निलो दाग बोक्सीले रगत चुस्दा भएको होईन सबैले जन्नै पर्ने |...